तपाईंहरू किचकिच गर्नुहुन्छ भने म... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर त्याग गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले पार्टीभित्रको मतभेदलाई भारतसँग जोडेकोमा आक्रोश पोखेका थिए।
'अघिल्लोपटक तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीबाट भारतले नभई मैले हटाएको हो। वैशाख १७ गते पनि मैले नै राजीनामा मागेको हो,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'तपाईंबाट पार्टी र सरकार दुवै चल्न सकेन, अब राजीनामा दिनुस्।'
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीनिकट कानुन व्यवसायीको सहयोगमा 'माथिको आदेश' भन्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि निवेदन दिइएको आरोप पनि लगाएका थिए। झापा निवासी सन्ध्या तिवारीका नाममा सोमबार मात्रै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्न निवेदन परेको हो।
'मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पनि गुटगत रूपमा गर्नुभयो। पार्टीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएन। योजना आयोग बनाउँदा पनि गुटगत तरिकाले गर्नुभयो। राजदूत लगायत विभिन्न नियुक्तिमा गुट हाबी भयो,' बैठकमा आफूले राखेका धारणाबारे खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पार्टीलाई छलेर ल्याउनुभयो। बजेट ल्याउँदा पनि कसरी वितरण गर्ने भनेर छलफल भएन। पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि विधि र नीति मान्नुभएन। पार्टी र सरकार दुवै कमजोर भएकाले अब तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ।'
'तपाईंमा अहंकार बढेको छ। विधि र पद्धतिमा चल्नुभएको छैन,' वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र अनियमितता बढेको छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद चल्न सकेको छैन। तपाईंले अब निकास दिनुपर्छ।'
'यो काम प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा भएको हो। मसँग प्रमाण छ,' गौतमले भनेका थिए, 'छानबिन कमिटी बनाइयोस्, प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको प्रमाण म दिन सक्छु।'
'तपाईं (प्रचण्ड) ३२ वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यागका लागि छाडेर देखाउनुपर्ने तपाईंले नै होला। आफूचाहिँ ३२ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहन हुने, म त २०७१ सालमा मात्रै नेतृत्वमा चुनिएर आएको हो, कसकै कृपाले टीका लगाएर दिएको होइन। म किन छाड्ने?' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने।
प्रधानन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि थप प्रश्न कसे, 'म त्याग गरेरै यहाँसम्म आएको हो। तपाईंलाई ३२ वर्ष अध्यक्ष र दुईफटक प्रधानमन्त्री भएर पनि अझै पुगेको छैन।'
'माधवजी १६ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा बस्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। झलनाथजी १३ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा बस्नुभएको हो अनि ६ महिना प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको हो,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'म त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने भनेर आउने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आउँदिनँ र संसदीय निर्वाचन पनि लड्दिनँ भनेको हो। तपाईंहरू किचकिच गर्नुहुन्छ भने म बाँचुञ्जेल चुनाव लड्छु।'
'अहिलेको समस्या तपाईंहरूको कुण्ठाका कारण आएको हो। जनता र देशको समस्याका कारण होइन,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, 'तपाईंहरूलाई जसले उचालेको छ, उनीहरूले समस्या छ भनेका हुन्।'
'भन्ने शैली सबैको एउटै थिएन होला, तर सबैको आसय राजीनामा नै थियो,' उनले भने, 'पार्टीकै सचिवालय सदस्यहरूले भनेकाले निकास दिनुपर्छ भनेर मैले पनि भनेको हो।'
'तपाईंले काम गर्न सक्नुभएन। झन्-झन् विवादमा पर्दै जानुभएको छ,' पन्तको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ।'
'उहाँका अभिव्यक्तिले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ। सरकार बनाइदिने र सरकार फेर्दिने भनेको विदेशीले हो भनेर उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभएको छ,' विष्टले बैठकमा भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्न मिल्छ? नेकपाको बहुमत छ भने नेकपाबाहेक कसले हटाउन सक्छ? उहाँबाट सरकार र पार्टी चल्न सक्ने नभएकाले निकास खोज्नुपर्छ।'
१) पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७, ००:५१:००